Vantany vao manapa-kevitra ny hampiasa azy | Ota Citizen's Plaza
Rehefa mampiasa ny efitrano lehibe, efitrano kely, efitrano fampirantiana ary gymnasium
Fialam-boly, ary rehefa mampiasa ny fotodrafitrasa amin'ny fialamboly izay heverina fa ilaina amin'ny fitantanana ny toerana ianao, aorian'ny fitondranao ireo antontan-taratasy manaraka ity iray volana alohan'ny antenaina hampiasana ho fitsipika ankapobeny dia mankanesa any amin'ny mpitan-tsoratra miaraka amin'ny fivoriana.
Tabilao fandaharana na fandrosoana, trakitra, fandaharam-potoana fiarovana, tapakila fidirana (ho ohatra iray).
Ho fanampin'ireo voalaza etsy ambony ireo, ny zava-nitranga tao amin'ny efitrano lehibe dia ny fanaovana sary an-tsehatra, ny sary ary ny sary acoustique.
Rehefa mampiasa ny efitrano famerenana, studio mozika, efitrano fihaonambe, efitrano fanaon'ny Japoney, efitrano fandroana, efitrano kanto
Fampiasana afo, sns. Fizarana fizahana ny tobin'ny mpamono afo ao Yaguchi
2-5-20 Tamagawa, Ota-ku Telefaona: 03-3758-0119
Fiarovana sns. Kaomisaria Ikegami
3-20-10 Ikegami, Ota-ku Telefaona: 03-3755-0110
Azafady mba ampahafantaro anay ianao satria azonao atao ny mametraka ny takelaka eo amin'ny toerana voatondro raha tsy amin'ny andro fisehoan-javatra ihany.
Amin'ny andro fampiasana, azafady mba asehoy ny fangatahana fankatoavana amin'ny fandraisana amin'ny rihana voalohany amin'ny rihana voalohany alohan'ny hampiasana ny efitrano.
Misy efitrano zaza any amin'ny gorodona voalohany sy fahatelo, noho izany azafady mba ampahafantaro ny mpiasa raha tianao hampiasa azy ireo.Azafady tantano amin'ny alàlan'ny fitantanan-tenan'ny mpampiasa izany.
Aorian'ny fampiasana, avereno any amin'ny fanjakana tany am-boalohany ireo fitaovana tsy ampoizina nampiasana.Ho fanampin'izay, azafady, alao antoka fa ento miaraka aminao ny fanananao manokana ary aza avelanao any amin'ilay toerana.
Raha simba na very ilay fotodrafitrasa na fitaovana dia takiana aminao ny manonitra ny fahasimbana.
Azafady mba alao mody any an-trano izay fako nateraky ny fihinanana sy fisotroana ary ireo fako namboarina teny ambony lampihazo.Raha sarotra ny hitondra azy mody, dia hikarakara izany amin'ny sarany izahay, koa mba ampahafantaro anay.
Misy mpikarakara manokana amin'ny rihana ambany rihana faha-2. (Fepetra avo 2.1m)
Homena anao ny tapakilan'ny fijanonana ho an'ny mpikarakara. (Isa voafetra) Tsy azo ampiasaina raha tsy misy tapakilan'ny fijanonana.
Azafady apetraho eo amin'ny fitaratry ny fiaranao ny tapakilan'ny fijanonanao.
Tsy misy toerana ipetrahana ho an'ny mpampiasa ankapobeny.
Tokony hataon'ny mpikarakara antoka fa tsy amin'ny fiara ny mpampiasa ankapobeny.
Azafady, midira avy eo amin'ny fidirana eo aloha amin'ny rihana voalohany.Ampiasao azafady ny ascenseur hahatratra ny efitrano tsirairay.
Raha miditra avy amin'ny fijanonana eo amin'ny rihana ambany rihana faha-2 ianao dia azonao atao ny mampiasa ilay fitaovana fiakarana tohatra, na dia misy dingana aza. (Milanja hatramin'ny 150 kg) Raha mifanerasera aminay mialoha ianao, dia hiandry ny mpiasa iray.
Ny efitrano fidiovana marobe dia miorina amin'ny rihana voalohany amin'ny rihana voalohany, amin'ny efitrano malalaky ny rihana voalohany, ary amin'ny rihana faha-1.